Zip Mmezi Ngwá Ọrụ. Idozi Zip Njikwa. Zip Idozi Software.
Gịnị mere DataNumen Zip Repair?
Iweghachite bụ most njirimara dị mkpa nke a zip ngwaahịa mgbake. Dabere na ule zuru oke anyị, DataNumen Zip Repair nwere ọnụọgụ mgbake kachasị mma, dị mma karịa ndị asọmpi ndị ọzọ, gụnyere WinRAR na ndị ọzọ na zip rụkwaa ngwaọrụ, n'ahịa!
Mụtakwuo banyere otu DataNumen Zip Repair na-ese anwụrụ mpi
Anọ m na-achọ imeghe ebe nchekwa nwere foto ochie, mana enweghị m ike, n'ihi njehie ụfọdụ. Mgbe ahụ, m na-eji DataNumen Zip Repair o mekwara anwansi.
Marketer lara ezumike nká
Dị natara ihe dị ka 1GB foto site na Zip faịlụ Echere m na m na-eju afọ mana D.ZIPR naanị ghaa nza
Akwadoo m ụfọdụ faịlụ na a Zip faịlụ site na akwụkwọ ndetu Mac G4 m. Enweghị m nhọrọ karịa ịkwado ha na PC, yana ịnwa ịmebi unzip, Achọpụtara m na
Mgbe ogbe rụziri, faịlụ niile e ọma rụziri na-adịrị m mac site na windo PKZip na maapụ SaMBa Network Drive. M
Ngwaahịa magburu onwe ya !! Enwere m obi abụọ ma ọ gbakeela nkwado ndabere zip nke ederede email m ma agbanweela m :)
Na-arụ ọrụ dị ukwuu. zoputara m oge kariri ibudata faịlụ a site na ebe ozo di iche nihi na fajiri faili a mebiri emebi, mmemme a na-edozi ya. A
M chọtụrụ ebe post otuto ma ha ahụghị ihe ọ bụla. Ọ na-amasị m inyere ndị ọzọ na-etinye aka na nsogbu na ndị nrụrụ aka zip faịlụ. Anọla m
Enweela m ọtụtụ egwuregwu, na ụdị faịlụ ndị ọzọ rụrụ arụ, ma tupu m nweta mmemme a, na-emebi kọmputa m, nke a bụ otu n'ime
Agbalịrịla m ọtụtụ ngwaahịa n'ọchịchọ m ịgbake a Zip faịlụ nke jupụtara na e-mail afọ zuru ezu mana ndị na-abụghị ndị gara nke ọma, ruo ugbu a. M
Atụmatụ atụmatụ: ikike idepụta
Nwetaghachi ihe niile m mebiri emebi.zip faịlụ Naanị nsogbu bụ na ọ nwere nsogbu na *.zip faịlụ nke onwe ha zipnkuzi. Ma ọ bụghị 10 pụọ
Ọ bụ ihe na-enye ume ọhụrụ ịhụ usoro ihe omume bara uru bara uru n’ebe ahụ
Most nke oge gị dị larịị screwed ma ọ bụrụ na ị download a zip faịlụ ma o nwere njehie crc, ọkachasị ọ bụrụ zip file
Ọ bụ mmemme dị mma n'ezie, maka ndị na - ebudata faịlụ sfx buru ibu na ịntanetị bụ ndị mebiri emebi, ana m akwado sọftụwia a! ya
Ọ bụ mmemme dị mma n'ezie, maka ndị na - ebudata faịlụ sfx buru ibu na ịntanetị bụ ndị mebiri emebi, ana m akwado sọftụwia a! ọ na-arụkwa ya zip faịlị na sfx dị mma! mana m chere na sọftụwia a chọrọ ikike ịrụzi rar faịlụ kwa :(
Kpamkpam! Nwere ike iji ngalaba akọwapụtara na weebụsaịtị gị ma ọ bụ akwụkwọ nkwado ọ bụla. Mee m amara ma dezie amaokwu CRC, ebe CRC na
Ga-enweta votu m maka uru PC kachasị mma. Ebe obu na azutara m DZIPR, ejirila m ya ọtụtụ oge na faịlụ ndị na-egosi ihe ọjọọ CRC ma ọ bụ nwee ndị ọzọ
Enwere m 800 MB zipfaịlụ na 97,00 nke emere na Solaris nke nwetara njehie na "Central dir" ya. Ozugbo nke a mere, enweghị m ike ịnweta karịa
Software nke International Cleanscape
Fredericton, Ọhụrụ Brunswick
Achọtara m ngwá ọrụ gị mgbe m na-eji weebụsaịtị http://rmse.awardspace.com na m ga-achọ ịsị na ngwaọrụ gị dị egwu na ọtụtụ atụmatụ.
Echegbula, ọ rụrụ ọrụ! Abụ m SOOO Obi ụtọ! Daalụ nke ukwuu maka enyemaka gị niile! Enwere m afọ ojuju 100% na m ga-akwụsị inye gị nsogbu. lol. Daalụ
Enwere m ekele maka gị
Daalụ maka nzaghachi ọsọ ọsọ na nke ọma. Ihe ngwọta gị rụpụtara! The Large File Splitter software na-arụ ọrụ, na mgbe ahụ Advanced Zip
Anyị nwere 60 Gigabyte zip faịlụ nke na-emeghe. Advanced Zip Repair enweghị ike ịrụzi ya dịka o buru oke ibu. Otú ọ dị, DataNumen nyere m
Main Akụkụ na DataNumen Zip Repair v3.5
Nwere ike idozi niile sub-ụdị nke Zip faịlị na ụdị faịlụ niile na-ewepụta onwe ha.
Lelee iguzosi ike n'ezi ihe data ma dozie ụkpụrụ CRC na-ezighi ezi na ebe nchekwa.
Nkwado ịrụzi Zip faịlụ na Zip ihe faịlụ buru ibu karịa 4GB.
Nkwado imezi ihe Zip faịlụ, gbawara Zip faịlụ na ezoro ezo Zip faịlụ.
Nkwado ịrụzi Zip faịlụ dị na mgbasa ozi rụrụ arụ, dị ka diski diski, Zip diski, CDROM, wdg.
Nkwado ịrụzi ọtụtụ faịlụ.
Nkwado ịchọta ma họrọ Zip faịlụ ndị a ga-arụzi na kọmputa ndị ahịa.
Nkwado iji weghachite ihe ndị edozi na ndozi Zip ma ọ bụ SFX Archive.
iji DataNumen Zip Repair iji weghachite mebiri emebi Zip Archives
mgbe gị zip faịlụ mebiri emebi ma ọ bụ mebie ma ị nweghị ike imeghe ha ọ bụla, ịnwere ike iji ya DataNumen Zip Repair i scanomi ihe zip faịlụ na-agbake dị ukwuu data ha ka o kwere mee.
Cheta na: Tupu na-agbake ọ bụla mebiri emebi ma ọ bụ rụrụ arụ zip faịlụ na DataNumen Zip Repair, biko mechie ngwa ndị ọzọ nwere ike gbanwee ya zip faịlụ.
Họrọ ndị mebiri emebi ma ọ bụ ndị rụrụ arụ zip faịlụ a ga-arụzi:
Nwere ike itinye ihe na zip aha faịlụ ozugbo ma ọ bụ pịa
bọtịnụ chọta zip faịlụ a ga-arụzi na kọmputa mpaghara.
Site na ndabara, DataNumen Zip Repair ga-rụkwaa zip faịlụ ma wepu ihe niile dị na ya na ndekọ aha ya bụ xxxx_recovered, ebe xxxx bụ aha isi mmalite ya zip faịlụ. Dịka ọmụmaatụ, maka isi mmalite zip faịlụ mebiri emebi.zip, ndabara mmepụta ndekọ ga-Damaged_recovered. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ iji aha ọzọ, biko pịa ma ọ bụ tọọ ya dịka:
Nwere ike itinye aha ndekọ ndekọ aha ozugbo ma ọ bụ pịa
bọtịnụ na-agagharị na họrọ mmepụta ndekọ.
bọtịnụ, na DataNumen Zip Repair ga start na-enyocha ma na-arụzi isi iyi ahụ zip faịlụ. Ogwe ọganihu
Mgbe mmezi usoro, ọ bụrụ na isi iyi zip Enwere ike idozi faịlụ ahụ nke ọma, ị ga-ahụ igbe ozi dị ka nke a:
Ugbu a, i nwere ike imeghe mmepụta ndekọ ma nweta ihe ndị dị na Zip faịlụ.
DataNumen Zip Repair A tọhapụrụ 3.5 na Mee 4, 2021
DataNumen Zip Repair 3.2 weputara na Disemba 19th, 2020
DataNumen Zip Repair 3.0 weputara na October 30th, 2020
DataNumen Zip Repair A tọhapụrụ 2.9 na May 5th, 2020
Nkwado iji gosipụta log dị iche iche.
DataNumen Zip Repair A na-ahapụ 2.8 na Eprel 22, 2020
Meziwanye usoro mgbake maka ihe ezoro ezo.
DataNumen Zip Repair 2.7 weputara na October 21th, 2019
Meziwanye usoro mgbake maka imebi ihe.
DataNumen Zip Repair A na-ahapụ 2.6 na August 20th, 2019
DataNumen Zip Repair A na-ahapụ 2.5 na November 7th, 2018
DataNumen Zip Repair A na-ahapụ 2.3 na Eprel 10, 2018
Auto wepụ natara ihe na Zip Archive.
DataNumen Zip Repair A tọhapụrụ 2.2 na Septemba 21, 2013
DataNumen Zip Repair 2.1 wepụtara na July 21, 2013
Melite nkwado na nnukwu faịlụ.
DataNumen Zip Repair A tọhapụrụ 2.0 na November 23, 2012
Degharia injin mgbake niile.
nkwado Zip faịlụ na Zip ihe buru ibu karịa 4GB.
DataNumen Zip Repair 1.8 wepụtara na Ọkt 25th, 2006
Melite nkwado iji gbasapụ / kewaa zip faịlụ.